Tsara ho an'ny Huawei, ny P10 dia hahazo Android 9 | Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Huawei, Android Version
Fantatsika androany vaovao tsara ho an'ny mpampiasa Huawei izay mitazona finday avo lenta amin'ny fampiasana taona vitsivitsy. Ny Huawei P10 dia telefaona mahavariana rehefa tonga teny amin'ny tsena. Telefaona iray nahasarika ny saina tamin'ny fandefasana azy ary nanolotra fampisehoana tena avo lenta. Fa ahoana aorian'ny kinova roa taty aoriana toy ny P20 sy P30 farany teo mety ho hadino. Huawei dia naniry ny tsy hitrangan'izany ary manome fitohizan'ny fanavaozana vaovao.
Imbetsaka izahay no naneho hevitra fa ny fahazoana finday avo lenta avo lenta amin'ny herintaona dia safidy tsara hananana finday mahery nefa tsy handany vola be. Ary Huawei, noho ny politikany tena tsara momba ny fanavaozana ireo terminal teo aloha, dia miombon-kevitra amintsika. Taorian'ny fanavaozana roa manan-danja amin'ny lafiny maro ny P10 mbola tsy antitra noho ny fanavaozana. Toy izany koa ny sonia faharoa an'i Huawei, nanomboka Ny Honor 8X koa dia hahazo fanavaozana ny kinova Android vaovao.
EMUI 9.0.1 dia tsy hiavaka amin'ny Huawei vaovao
Ny kinova vaovao an'ny rafitry ny fiasan'ny Huawei, mifototra amin'ny Android 9 Pie, dia ho azo alaina ho an'ny maodely farany. SAINGY ihany koa dia ho ho an'ireo fitaovana manana taona vitsivitsy hatramin'ny nanombohany. Vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa Huawei izay hahita ny fomba hanohizan'ny fanavaozana ny fitaovany mandritra ny taona iray farafahakeliny. Amin'izany no ahitantsika ny fomba ny telefaona iray navoaka tamin'ny taona 2017 dia mbola manasongadina ny lozisialy farany indrindra. Araka izany, ny teoria mifanohitra amin'ireo mpanamboatra hafa izay mijery ny fihetsik'i Huawei dia toa fialantsiny hatrany.
Ny Huawei P10 dia ohatra amin'izany ny smartphone dia mety mifanaraka tanteraka amin'ny fanavaozana, na roa taona aty aoriana aza. Tamin'ny fandefasana azy dia nanana ny rafitra fiasa EMUI 5.1 miorina amin'ny Android 7 Nougat. Ary mandalo fanavaozana iray hafa teo aloha mifototra amin'ny Android 8 Oreo, hitantsika ny fomba hananany ny kinova farany indrindra. Hatramin'ny andiany telo an'ny Android mandeha tsy misy olana amin'ny terminal mitovy.
Asa lehibe avy amin'ny Huawei amin'ny fanavaozana. Tsy ny fananana fitaovana manana roa taona mahery izay avelan'ny orinasa hafa ho adino. Saingy amin'ny alàlan'ny fahazoana ny sosona fanaonao EMUI dia havaozina am-pahendrena mba hahafahany miasa toy izany koa tamin'ny finday avo lenta vao nivoaka ary ny iray tonga tamin'ny 2017. Noho izany, araka ny lazainay amin'ny lohatenin'ny lahatsoratra, miarahaba an'i Huawei izahay. Ary manantena izahay fa ho ohatra ho an'ny orinasa maro hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Tsara ho an'i Huawei, hahazo P10 ihany koa ny P9
Siphon dia hoy izy:
Efa napetrako nandritra ny 3 andro izy ary miasa tsara.
Nahazo tamin'ny alàlan'ny Hicare sy OTA.
Valiny tamin'i Siphon
Rafa Rodriguez Ballesteros dia hoy izy:
Araka ny lazaintsika, amin'ity lafiny ity dia ohatra iray tokony harahina i Huawei. Ary ny fananana ity politika fanavaozana ity dia tsy isalasalana fa zavatra manan-danja tokony ho raisina rehefa manao fampiasam-bola amin'ny smartphone.
Valiny tamin'i Rafa Rodríguez Ballesteros
Black Shark 2: vidiny sy fividianana any Espana